Astrology Archives - Amawpyay
မြင်းနှစ်ဖွား (၁၉၃၀၊ ၁၉၄၂၊ ၁၉၅၄၊ ၁၉၆၆၊ ၁၉၇၈၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၁၄) များအတွက် ဟောစာတမ်း
မြင်းနှစ်ဖွား (၁၉၃၀၊ ၁၉၄၂၊ ၁၉၅၄၊ ၁၉၆၆၊ ၁၉၇၈၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၁၄) များအတွက် ဟောစာတမ်း မြင်းနှစ်ဖွားသည် တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ တိရိစ္ဆာန်များထဲတွင် သတ္တမမြောက်သောနှစ်ဖွား ဖြစ်လေသည်။ မြင်းသည် မိုးနတ်မင်း၏ ပါတီအစည်းအဝေးသို့ သွားရာလမ်းခရီးတွင် သင်္ချိုင်းတစ်ခုကို ဖြတ်ကျော်ရလေသည်။ မြင်းသည် အလွန်အမင်းကြောက်ရွံ့သောကြောင့် ဖြတ်ရန် တွန့်ဆုတ်နေလေသည်။ နောက်ဆုံး ဖြတ်ကျော်လာပြီးသောအခါ အရှိန်အဟုန်ပြေးပြီး လာပေမယ့် အရှေ့မှာ ၆ ဉီးက ရောက်ရှိနေပြီး ဖြစ်သောကြောင့် မြင်းက သတ္တမမြောက်သောနှစ်ဖွားဖြစ်လာလေသည်။ မြင်းနှစ်ဖွားများသည် ခွန်းအာပြည့်စုံပြီး သွက်လက်လှုပ်ရှားသူများ ဖြစ်ကြသည်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့် ကျော်ကြားမှုထက် ပျော်ရွှင်မှုကို ပိုလိုလားသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် ဒေါသကြီးသူများ ဖြစ်ကြသော်လည်း ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှင် …
မြွေနှစ်ဖွား (၁၉၂၉၊ ၁၉၄၁၊ ၁၉၅၃၊ ၁၉၆၅၊ ၁၉၇၇၊ ၁၉၈၉၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၁၃) များ အတွက် ဟောစာတမ်း
မြွေနှစ်ဖွား (၁၉၂၉၊ ၁၉၄၁၊ ၁၉၅၃၊ ၁၉၆၅၊ ၁၉၇၇၊ ၁၉၈၉၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၁၃) များ အတွက် ဟောစာတမ်း မြွေသည် ရာသီခွင်တိရစ္ဆာန်အားလုံး၏ ဆဋ္ဌမမြောက်ဖြစ်သည်။ တနေ့သောအခါ မိုနတ်မင်းကြီးက ၎င်း၏ပါတီအစည်းအဝေးသို့ ရောက်ရှိလာပုံကိုမူတည်၍ တရုတ်ရာသီခွင်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဟုပြောကြားလေသည်။ မြွေနှင့် နဂါးသည် ရုပ်ရည်သွင်ပြင်တူသည့်အလျောက် သူငယ်ချင်းကောင်းများလည်း ဖြစ်ကြသည်။ အဆုံးအဖြတ် အစည်းအဝေးသို့ အတူတူရောက်လာလေသည်။ သို့သော် မိုးနတ်မင်းကြီးက ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားကြီးသော နဂါးကို အရင်မြင်သောကြောင့် နဂါးသည် ပဉ္စမမြောက်ဖြစ်လာပြီး မြွေသည်ကား ဆဌမမြောက်ဖြစ်လာလေသည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် စရိုက်လက္ခဏာများ မြွေများသည် ဟာသဆန်ပြီး ထူးခြားသည်။ အသေးအမွှားလေးတွေကအစ အမှားပါတာ မနှစ်သက်ကြဘူး။ အလုပ်ကိုလည်း သူတစ်ပါးအကူအညီမသုံးပဲကိုယ်ကိုတိုင်လုပ်ကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် တစ်ပါးသူများကို …
နဂါးနှစ်ဖွားများ (၁၉၂၈၊ ၂၉၄၀၊ ၁၉၅၂၊ ၁၉၆၄၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၈၈၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၂၄) အတွက် ဟောစာတမ်း
နဂါးနှစ်ဖွားများ (၁၉၂၈၊ ၂၉၄၀၊ ၁၉၅၂၊ ၁၉၆၄၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၈၈၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၂၄) အတွက် ဟောစာတမ်း နဂါးသည် ရာသီခွင်တိရစ္ဆာန်အားလုံး၏ ပဉ္စမမြောက်ဖြစ်သည်။ တနေ့သောအခါ မိုနတ်မင်းကြီးက ၎င်း၏ပါတီအစည်းအဝေးသို့ ရောက်ရှိလာပုံကိုမူတည်၍ တရုတ်ရာသီခွင်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဟုပြောကြားလေသည်။ အားလုံးက အစွမ်းထက်သော နဂါးကြီး စောစောရောက်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ကြသည်။ သို့သော် သူသည် ကြွက်၊ နွား၊ ကျားနှင့် ယုန် ရောက်ရှိလာပြီးမှသာ ပါတီအစည်းအဝေးသို့ရောက်ရှိလာလေသည်။ သူဘာကြောင့် နောက်ကျနေတာလဲလို့ မေးတော့ လမ်းမှာ မိုးခေါင်နေတဲ့ ရွာတစ်ရွာကို တွေ့လိုက်ရတယ်လို့ နဂါးကပြောပါတယ်။ ထိုကြောင့် လမ်းတစ်ဝက်နေရပ်တန့်ပြီး ထိုရွာကို မိုးရွာစေရန်ကူညီပေးနေတာဟု ပြန်ဖြေလေသည်။ မိုးနတ်မင်းကြီးသည် ဤမွန်မြတ်သောအကျင့်ကိုကြားသိရသောအခါ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကာ ပဉ္စမရာထူးကို …
ယုန်နှစ်ဖွားများ (၁၉၂၇၊ ၁၉၃၉၊၁၉၅၁၊ ၁၉၆၃၊ ၁၉၇၅၊ ၁၉၈၇၊ ၁၉၉၉၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၂၃) အတွက် ဟောစာတမ်း
ယုန်နှစ်ဖွားများ (၁၉၂၇၊ ၁၉၃၉၊၁၉၅၁၊ ၁၉၆၃၊ ၁၉၇၅၊ ၁၉၈၇၊ ၁၉၉၉၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၂၃) အတွက် ဟောစာတမ်း ယုန်သည်တရုတ်ရာသီခွင်များထဲတွင် စတုတ္ထလဖြစ်သောနှစ်ဖွားများဖြစ်ကြသည်။ ဒဏ္ဍာရီအရ ယုန်သည် ၎င်း၏အရှိန်ကြောင့် မာနကြီးပြီး မာနကြီးသည်။ သူသည် နွာ’နှင့် အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး နွား၏နှေကွေးပုံကို အမြဲလှောင်ပြောင်ခဲ့သည်။ တနေ့သောအခါ မိုနတ်မင်းကြီးက ၎င်း၏ပါတီအစည်းအဝေးသို့ ရောက်ရှိလာပုံကိုမူတည်၍ တရုတ်ရာသီခွင်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဟုပြောကြားလေသည်။ ယုန်သည်မိုးလင်းသောအခါထွက်၍ မိုးနတ်မင်းဆီသို့သွားလေသည်။ ခရီးတစ်ဝက်ရောက်သောအခါ ငါသည်အစောဆုံးထွက်လာတာပဲ ငါပဲပထမဖြစ်မှာပါဟု ယုံကြည်ပြီး တရေးအိပ်လိုက်လေသည်။ တရေးနိုးလို့ ထသွားချိန်မှာ မိုးနတ်မင်းအစည်းအဝေးသို့ ရှေးဉီးစွားသုံးဦးကရောက်ရှိပြီး ဖြစ်နှင့်နေလေပြီ။ ထိုသူသုံးဦးတွင် သူအထင်သေးနေသော နွားလည်းပါလေသည်။ ထိုကြောင့် ယုန်က လေးနှစ်မြောက်နှစ်ဖွားဖြစ်လာလေသည်။ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင် ယုန်များသည် လကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လ၏အရိပ်သည် …
က်ားႏွစ္ဖြားမ်ား (၁၉၅၀၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၇၄၊ ၁၉၈၆၊ ၁၉၉၈၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၂၂) အတြက္ ေဟာစာတမ္း
က်ားႏွစ္ဖြားမ်ား (၁၉၅၀၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၇၄၊ ၁၉၈၆၊ ၁၉၉၈၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၂၂) အတြက္ ေဟာစာတမ္း က်ားႏွစ္သည္ တ႐ုတ္႐ိုးရာရာသီခြင္တြင္ တတိယေျမာက္ေသာႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ က်ားတစ္ေကာင္၏အားမာန္ကို ဘယ္သူမွမယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဟု ထင္ၾကေသာ္လည္း ေကာင္းကင္ဘုံအေျပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႂကြက္သည္လိမၼာပါးနပ္မႈသည္ ပထမေနရာရရွိသြားၿပီး ႏြားသည္ ႀကိဳးစားလုံ႔လရွိမႈေၾကာင့္ ဒုတိယေနရာကိုရရွိသြားခဲ့သည္။ အားမာန္ဟုျပင္းေသာ ေတာဘုရင္က်ားကမူ တတိယေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ တ႐ုတ္႐ိုးရာဒ႑ာရီႏွစ္ဖြားတြင္ တတိယေနရာသို႔ေရာက္ရွိသြားေသာ ႏွစ္ဖြားျဖစ္ေလသည္။ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ဘဝစိန္ေခၚမႈေကာင္းၿပီး စြန႔္စားမႈမ်ားကို ႏွစ္သက္ေသာ သတၱိရွိၿပီးတက္ႂကြသူမ်ားျဖစ္ေလသည္။ ၎တို႔၏ ရာသီခြင္တိရစာၦန္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ သန္မာၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသူ၊ သတၱိရွိၿပီး ရဲရင့္မႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ ရက္ေရာမႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ၍ မိမိကိုယ္ကို …
နွားနှစ်ဖွားများ (၁၉၂၅၊ ၁၉၃၇၊ ၁၉၄၉၊ ၁၉၆၁၊ ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၅၊ ၁၉၉၇၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၂၁) အတွက် ဟောစာတမ်း
နွားနှစ်ဖွားများ (၁၉၂၅၊ ၁၉၃၇၊ ၁၉၄၉၊ ၁၉၆၁၊ ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၅၊ ၁၉၉၇၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၂၁) အတွက် ဟောစာတမ်း နွားနှစ်သည်တရုတ်ရိုးရာရာသီခွင်ထဲတွင် ဒုတိယမြောက်သောနှစ်ဖွားများဖြစ်လေသည်။ နွားနှစ်ဖွားများသည် အလုပ်များကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော်လည်း ဘယ်သောအခါမှ ချီးကျူးခြင်းကို မခံရပေ။ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင် နွားသည်တန်ဖိုးရှိသော တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးတွင် အလုပ်ကြိုးစားပြီး ရိုးသားခြင်း စသော ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ နွားနှစ်ဖွားများအတွက် ကံကောင်းစေသောအရာများမှာကား ကံကောင်းစေသောအရောင် – အပြာ၊ အဝါ၊ အစိမ်း, ကံကောင်းစေသောနံပါတ် – ၁၊ ၄ ကံကောင်းစေသောပန်း – ကြာပန်း, ကုသိုလ်ပြုလုပ်ရန်ကောင်းသောအရပ် – အရှေ့ရပ်၊ အရှေ့တောင်အရပ် ကြွယ်ဝချမ်းသာစေသောအရပ် – အနောက်မြောက်, …
ကြွက်နှစ်ဖွားမွေးဖွားသူများ (၁၉၂၄၊ ၁၉၃၆၊ ၁၉၄၈၊ ၁၉၆၀၊ ၁၉၇၂၊ ၁၉၈၄၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၈၊ ၂၀၂၀) အတွက် ဟောစာတမ်း
ကြွက်နှစ်ဖွားမွေးဖွားသူများ (၁၉၂၄၊ ၁၉၃၆၊ ၁၉၄၈၊ ၁၉၆၀၊ ၁၉၇၂၊ ၁၉၈၄၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၈၊ ၂၀၂၀) အတွက် ဟောစာတမ်း ကြွက်နှစ်ဖွားမွေးဖွားသူများသည် တရုတ်ရာသီခွင်များထဲတွင် ပထမဆုံးသောရာသီခွင်ဖြစ်သည်။ ကြွက်သည် ကောင်းကင်ဘုံအပြေးပြိုင်ပွဲတွင် လိမ္မာပါးနပ်မှုကြောင့် ပထမနေရာရက ပထမဦီးဆုံးသောရာသီခွင်ဖြစ်လာလေသည်။ ကြွက်သည် နွားကိုလှည့်စားက နွားကိုစီး၍ အဆုံးအဖြတ်စည်းကိုရောက်သောအခါ နွားပေါ်ကခုန်ချကာ ပထမဆုံးပန်းဝင်သွားသောကြောင့် ကြွက်သည် ပထမရာသီခွင်ဖြစ်လာပြီး နွားသည် ဒုတိယနေရာရကာ ဒုတိယရာသီခွင်ဖြစ်လာလေတော့သည်။ ကြွက်နှစ်မွေးဖွားသူများသည် ထက်မြက်ပြီး လျင်မြန်သောတွေးခေါ်တတ်သူများ၊ အောင်မြင်ပြီး အေးချမ်းသာယာသော ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်သောသူများလည်းဖြစ်ကြသည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် စရိုက်လက္ခဏာများ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီး တက်ကြွသော၊ ကြွက်နှစ်ဖွားများသည် လူတိုင်းနှစ်သက်ကြသည်။ သူတို့သည်တစ်ပါးသူ၏ စိတ်ခံစားချက်ကို ခံစားပေနိုင်ပေမယ့် ကြွက်နှစ်ဖွားများသည် အလွန်ခေါင်းမာသောသူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည် ကြင်နာတတ်သော်လည်း …
၂၀၂၂ခုနစ္ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ တႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
၂၀၂၂ခုနစ္ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ တႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင့္အတြက္ မၾကာခဏ ခရီးထြက္ရျခင္း ရွိၿပိး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ အမ်ားသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကိစၥ ေဆာက္႐ြက္ရမည္။ မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြေၾကးမ်ား ဝင္လာတတ္သည္၊၊ အိမ္ၿခံေျမအေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ရကိန္း ရွိသည္။ စက္စၥည္းႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမ ဝင္ကိန္းရွိသည္။ မိမိလြယ္ကူမည္ဟု ယူဆေသာ ကိစၥမ်ား အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း ခံရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မသမားသူတို႔၏ လိမ္လည္းမႈ ခံရမည္။ စကားမတည္သူမ်ား၊ စကားကို ဒြိဟေျပာဆိုတတ္သူမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ (16. 4. 2022 မွ စ၍ ( 16. 6. 2022) အထိ လုပ္ငန္းခြင့္တြင္ အေလာတႀကီး …
၂၀၂၂ခုနစ္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ တႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
၂၀၂၂ခုနစ္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ တႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားတို႔သည္ ႏွစ္ကူးစ စိတ္သစ္ကိုယ္သစ္ႏွင့္ စိတ္ကူးသစ္ျဖင့္၊ အလုပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီး သြားလာျခင္းမ်ား ႀကဳံလာတတ္သည္။ မိမိခန႔္အပ္ထားေသာ အတြင္းလူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ျပႆနာ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား က်ေပ်ာက္တတ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ (16. 1. 2022 မွ စ၍ ( 16. 4. 2022) အထိ မိမိလုပ္ငန္းခြင္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလိမ့္မည္။ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ယာဥ္ႏွင့္ဆက္ပစြည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အုတ္၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ အုန္းဆီ၊ အုန္းသီးလုပ္ငန္း၊ အိမ္အလွဆင္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ငွားလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းမည္။ လုပ္ငန္းကိစၥအတြက္ အဂ္ါ၊ တနဂ္ေႏြသားသမီးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ …
၂၀၂၂ခုနစ္ အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ တႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
၂၀၂၂ခုနစ္ အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ တႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း အဂၤါသားသမီးမ်ားတို႔သည္ မိမိ၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားရရွိၿပိး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ ကုသိုလ္ဒါန၊အလႉတန္းႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ ဘုရားဖူး ခရီးသြားရကိန္း ရွိသည္။ မေမ်ာ္လင့္ဘဲ သားသမီးမ်ားအတြက္ ရပ္ေဝး၊ နယ္ျခား ေကာင္းျခင္းခရီး သြားရကိန္းရွိသည္။ မိမိလက္ေအာက္ငယ္သား တပည့္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရတတ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ပညာေရးမ်ား ေလ့လာေဆာင္႐ြက္ရမည္။ စာေပေလ့လာၿပိး လုပ္ငန္းခြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုလွ်င္ အထူးခံစားခြင့္ရျခင္း၊ စက္မႈလက္မႈပညာရပ္မ်ားတြင္ အထူးေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ (16. 4. 2022 မွ စ၍ ( 16. 6. 2022) အထိ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အက်ိဴးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းမည္။ သစ္သီးဝလံမ်ား …